Alaabada ugu iibinta badan
Kuraasta 3 * 40HQ ayaa la raray, iibka kursikan ayaa sii kordhaya, sababta ayaa ah in kursigan lagu heli karo midabyo kaladuwan, MOQ yar, tayo sare leh iyo qiimo wanaagsan, oo adkeysi iyo waara, labadaba guriga iyo bannaanka labadaba waa kuwo wax ku ool ah. Waxay si fiican u iibiyaan waddan kasta, gaar ahaan Waqooyiga Ameerika, ...
Ku hogaaminta tayo sare gudaha
4 * 40HQ armaajooyinka kuraasta carruurta ee sarreeya ayaa la raray, Si loo buuxiyo shuruudaha ugu sarreeya tayada macaamiisha, tayada ayaa si joogto ah loo wanaajiyey habsami u socodka wax soo saarka, kooxdeena kormeerka tayada xirfadeed ayaa kormeertay oo xakameysay tayada hawsha oo dhan. ...
Xaalad cusub, tartan cusub
Carwada 45-aad ee Shiinaha (Guangzhou) Carwada Caalamiga ah ee Alaabada Guryaha, oo ay saameysay cudurka faafa, macaamiil fara badan oo ajnabi ah uma imaan karin bandhig si ay u xushaan alaabada bartilmaameedka ah, carwada ayaa wali lagu qabtay si habsami leh. Alaabooyin fara badan, Badeecadeenu waxay leeyihiin faa'iido weyn, Naqshadeyn casri ah ...
Dukaanka 23-aad ee Shiinaha ee loo yaqaan "Global Custom alaabta Expo", Alaabada ku taal carwada ayaa lagu sharixi karaa isu soo uruurinta hibooyin badan, marka la barbar dhigo badeecadaha isla duugga ah, qaabka iyo tayada wax soo saarkoodu waa kuwo aad u tartamaya tayada iyo qiimaha alaabadayadu si dhow. waxaa daawaday quali badan ...